100 Africa inonyanya kukoshesa: kondinendi inomiririrwa mumasangano epasi rose, pasinei nekusawirirana - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
HOME » upfumi »100 Africa inonyanya kukosha: kondinendi inomiririrwa mumasangano enyika, pasinei nekusawirirana - JeuneAfrique.com
100 inonyanya kukoshesa Africa: kondinendi yakanyatsomiririrwa mumasangano epasi rose, pasinei nekusawirirana - JeuneAfrique.com
Sezvakaratidzwa neAustralia tsanangudzo yeAustralia inonyanya kukoshesa 100, nhamba dzakawanda dzinoremekedzwa dziri mu kondinendi dzine zvigaro zvekutungamirira kune dzimwe nyika, asi vashomanana vanogara munzvimbo dzakakwirira. Tsanangudzo.
Ngozi Okonjo-Iweala (Bhengi renyika), Vera Songwe uye Amina J. Mohammed (UN), Tedros Adhanom Ghebreyesus (WHO), Fatma Samoura (FIFA) kana Fatou Bensouda uye Chile Eboe-Osuji (ICC): manhamba akawanda zvikuru chepamusoro kwedu 100 nesimba zvikuru Africans kuchengeta kana kuti ichiitwa zvinzvimbo nokuti mukati makuru dzomunyika masangano .
Asi mamwe mabasa achiri kuchengetedzwa kwevaAmerica neEurope. Kusvikira rini? Vaimbove Nigerian mushumiri uye Executive munyori New Partnership nokuda Africa Development (NEPAD AUDA), Ibrahim Assane Mayaki decrypts dambudziko kuti chaizvoizvo zvose yose multilateral hurongwa.
Vechiduku muAfrica: Pakupedzisira February, kutevera kushamisika kusunungurwa kwaJim Yong Kim, iwe wakabudisa a triune kudana kuti munhu weAfrica atungamirire Bhengi reNyika. Wakanyatsovimba kuti unonzwika here?
Ibrahim Assane Mayaki: Kwete, yakabviswa. Nheyo inotungamirira chirongwa chekugadzwa pamusoro weBanyika yeNyika inopa kuti nguva dzose iri muAmerica inotora nzvimbo, uye iyi nhamba haisati yadzokororwa. Zvakakosha zvakanga zvisipo. Mushure mokugadzwa kwemuongorori mutsva, ndakakurukura nezvazvo Ngozi Okonjo-Iweala, uyo aiva mutungamiriri mukuru. Akandiudza kuti zvakanga zvakakosha kutanga chirongwa ichi chekukakavadzana kuti utungamirire mitsara.
IWorld Bank, IMF, masangano eBretton Woods, zvose zvakanyatsogadziriswa, chaizvoizvo, iri kuburikidza nehutano hwehutano
Vamwe vanhu vakafunga kuti Mhandara Okonjo-Iweala, chaizvoizvo, akawana mikana yake. Kunyanya kubva iye zvino ava neNigeria uye America yenyika ...
Aiwa, haana kumbobvira awana mukana chaiwo, uye mubvunzo hausi wehukama hwenyika mbiri. Dambudziko racho, rakawandisa mumaonero angu, ndeyokuti World Bank, IMF, masangano eBretton Woods, iyo yose yakasiyana-siyana muchokwadi, iri kuburikidza nedambudziko rekuzivikanwa. Izvo zvinotungamirira kumibvunzo yekufungidzira yorudzi rwechipiri: inoonekwa neBusiness World yekufambidzana inobatana neicho chaiyo mamiriro ezvinhu here? Izvi ndezvekukakavadzana kuripo mukati mezvikoro izvi.
Chinhu chinoshamisa kwazvo ndechokuti pasinei neizvi, Mutungamiri mutsva weBabhangi, David Malpass, ave akasarudzwa kubva mumuganhu wakaoma zvikuru wemusasa waDonald Trump. Izvi zvinoreva kuti anotakura pfungwa chaiyo yaachaedza kuita.
Yakatsanangurwa saizvozvi, iri kunetseka!
Inogonawo kuva mukana. Isu tatova pane nguva inotambudza yehutano hwakasiyana-siyana uye masangano anotarisira kutonga kwenyika yose. Munyaya yeWorld Bank, dambudziko iri rave rasvika pakakwirira uye isu takasara nemumwe munhu anopesana nehuwandu hwematongerwo enyika. Ndinofunga kuti inogona kukonzera kukakavadzana uye kubereka chimwe chinhu.
Izvi hazvitidzivirire kuramba tichifunga nezveChina semudiwa wepamusoro, asi ngatiregei tisina maturo
Inowanzotaurwa kuti China inogona kuva mushamwari kune vaAfrica, kunyanya panyaya idzi dzehutongi hwepasi rose. Ndizvo zvaunofunga here?
Zvinhu zvakachinja. Pamberi pekusarudzwa kwaDonald Trump, taive muhurongwa hwepasi pose hwakarongeka nehuwandu hwemashoko, maitiro ayo akabudirira. Pasi pemaonero aya, munhu wose aive neanogadzirira sarudzo yake, yega. Kuuya kwaTrump kwakaputsa mazano aya. Kwete zvakare mune zvezvematongerwe enyika, zvino vateereri vanofanira kutora magasi uye kuratidza maitiro avo chaiwo. Izvi hazvitidzivirire kuramba tichifunga nezveChina semudiwa wepamusoro, asi ngatiregei tisina maturo.
Mukati yako mafirimu, iwe wakatsanangurawo kuti kune rimwe rekuregwa kwemasangano epasi rose muAfrica, zvose muvanhu uye pakati pevakuru. Unogona kutsanangura here?
Pane zvikonzero zvakawanda zveizvi. Yokutanga: Kwemakore anopfuura makumi matatu kubva pakusununguka, mazano ehupfumi akachengetedzwa pamwe chete nemasangano akaita seWorld Bank, IMF neAfrica technocrats. Zvigumisiro hazvina kukwana, izvo zvakagadzira manzwiro ekuti izvi zviviri zvemasangano edzimba / technocrats hazvina kubudirira chero chinhu.
Chechipiri, pane kuve nekugadzirisa maitiro uye izvo zvinopesana nehutano hwevanhu. Uye chechitatu, tinoona kuti mari yakarongedzwa nemasangano aya haasati yashanduka kubva mumakore e1960 uye haisati yashandurwa nemamiriro ezvinhu.
>>> VERENGA - Guterres: "Kuremera kweAfrica munharaunda yepasi rose inofanira kuti iyanwezve "
Iwe unofunga kuti apo munhu weAfrica ane chinzvimbo chakakosha mune rimwe remasangano aya, izvi zvine simba rakanaka munyika yake here?
Iko kune maitiro ose. Kana iwe uchitarisa Michel Sidibé, uyo akatungamira UNAIDS asati adzokera kuMali semutungamiri wehutano, anokwanisa kushandisa bhuku rake rekerosi uye unyanzvi hwekugadzira hutano hwehutano hwevanhu. Asi iwewo une nyaya yevaya vanodzoka vanoda kutamba mune zvematongerwo enyika. MuWest Africa ivo vanonzi "black suitcase carrier".
Kazhinji, zvikasashanda: hadzisisina zvakarurama ataure, vakanga kure kure, dzimwe nguva vanotambura kubva mufananidzo zvakaipa masangano apo vaishanda ... muchikwata Chechitatu: vaya vanodzokera sezvo zvidzidzo kana consultants, uyo kazhinji vane basa rakanaka.
Ndezvipi zvingatungamirirwa nevatungamiri veAfrica mumasangano makuru enyika?
Kutanga, inofanira kusimbiswa kuti vamwe vatova nemabasa makuru. Tedros Adhanom Ghebreyesus, somuenzaniso, mutungamiriri we WHO. Gilbert Houngbo, IFAD (International Fund for Agricultural Development). Amina J. Mohammed, uyo ari mubatsiri weAntónio Guterres paUnited Nations uye iyo inotungamirira pfungwa dzeAfrica. Dambudziko, zvakare, nderokuti masangano aya ari kuburikidza nedambudziko rakadzama rekuzivikanwa, rakabatanidzwa nehuwandu hwematambudziko ehurumende yakawanda. Ndizvo izvi mupfungwa kuti vaAfrica vanofanira kuzvibvunza kuti zvipi zvidzidzo zvinogona kushandira zvido zvavo uye apo zvingave zvine simba.
Motokari yeAbidjan-Ouaga: Bolloré anonetseka pamusoro pekubatsira kweprojekti - JeuneAfrique.com